SomaliTalk.com » xorriyo
Home » Qoraallada Halkudhegga "xorriyo"
Kulan si aad ah loo soo agaasimey ayaa waxaa galabnimadii Sabtida ee July 31, 2010 isagu yimid Jaaliyada Ogadeniya ee Gobolka Minnesota. Kulankan oo ka dhacey madasha shirarka ee Minneapolis Convention Center Halkan ka daawo sawirada…. Shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhamaan qaybaha bulshada Ogadeniya ee Minnesota iyo dadweyne fara badan oo ka socda Jamhuuriyada Soomaaliya ayaa looga hadley...
Halkudheg: xoriyo, xorriyo
Wax wadahadal ah kama dhaxeeyo ONLF iyo Itoobiya(gudoomiyaha jwxo). Xoogga dalka Ogadenya oo dagaala isdaba Joog ah kuqaaday Ciidamada itoobiya. Ururka Hooyooyinka Ogadenya ee Minnesota oo soo gaba gabeeyay Shirkoodii. Ciidanka Gumaysiga oo Magaalada Dhagax buur Shacabka Dhib ugu Gaystay. Magaalada Godey oo bandow lagu soo rogay maqribka kadib ilaa subaxii. Hooyo ay ciidanka gumaysigu ku mariyeen...
Dhibaatooyinkaay ciidamada Cawga itoobiya ku hayaan shacabka Ogaadeenya
Barnaamijkii Radio Xoriyo 16 Oktober 2009. · Dagaalo iyo iska hor imaad ciidan oo warinaayo meelo badan oo ogadenya ka mid.´ · Dhibaatooyinkaay ciidamada Cawga itoobiya ku hayaan shacabka Ogaadeenya · Filimkii “Silent Cry” oo wadanka Finland soo gaaray. · Gudiga Fulinta Ogaden Students Forum (OSF) oo shir isugu yimid. Dagaalo iyo iska hor imaad ciidan...